HEENSARAARKA DAMALADA | Dhaymoole News
Ha U Dhaqmin Sida Rida Buurta Markaad Hadlayso
Professor William James, mar uu ku guda jiray mid kamida casharadii uu bixinaayay, ayuu hadalka yara hakiyay, si uu u iftiimiyo in qofku uu lahaan karo hal ujeedo marka uu khudbad jeedinayo, islamarkaana ay tahay in uu hal saac kusoo afmeero. Sikastaba ha-ahaatee, beryahan dambe waxaan maqlay damaloyahan ama af-maal, khudbad saddex daqiiqo ah jeedinaya. Bilaabaya hadalka kaas oo doonaya inuu 11 qodob dareenkeena ku soo jiidto hal mar. Qodobada hadalkiisu ka koobanyahay qodobkiiba, wuxuu ku jirayaa 16 ilbidhiqsi iyo badh! In la aqbalaa way adagtahay, miyaanay ahayn, qof garaadkiisu aad u sareeyo waa suurtagal inuu isku dayo wax kastoo aan marnaba la rumaysankarin. Sax, waxaan soo xiganayaa xaalad aad u adag, laakiin se u janjeedha xaga qaladka, hadiiba aanu gaadhsiisnayn heerka aynu sheegayno, habkaasi waa mid hodikara qofkastoo barbarad ah. Waa sida buugyarihii furinlaha baariis uu dalxiisayaasha hal maalin ugu sharixi jiray. Hadalka waxa loo jeedin karaa, sidii oo aad lug ku soo dhexmartay carwada taariikhaha dabiiciga ah ee maraykanka mudo soddon daqiiqo ah. Laakiin waadixin iyo nasasho midna majirto. Khudbado farabadan ayaa u maaxduma waadixin la’aan maxaa yeelay af-yaqaanku wuxuu isku dayayaa inuu ka waramo dhacdooyinkii dunida ka dhacay oo dhan, iyadoo loo cayimay wakhti yar oo aad u kooban. Wuxuu ka boodayaa qodob wuxuuna u boodayaa qodob kale si lamida sida degdega iyo dhakhsaha leh ee ay u boodo rida buurtu.
Rida buurtu waxay ku nooshahay woqooyiga America, halkii marna waxay boodaa masaafad 12feet ah ama 3.5M. sidaadarteed, marka aad hadlayso sideeda oo kale ha noqon, xawaaraha hadalkaagana dhexdhexaad ka dhig.
Hadal oo dhami waa inuu gaabanyahay, sidaadarteed soo koob. Tusaale ahaan, hadiiba aad doonayso in aad ka hadasho ururada shaqaalaha, ha isku dayin in aad saddex ilaa lix daqiiqo kaga waranto, sida ay ku yimaadeen, siyaabaha ay ku shaqeeyaan, waxyaabaha u qabsoomay, caqabadaha ka horyimaada iyo sidii loo xalin lahaa. Maya, maya; hadii aad sidaa yeesho, qofna fikrad cad kama haysan doono waxa aad dareerisay.
In aad kolba qayb ka waranto walibana iftiimiso oo aad sharaxdaa miyaanay ahayn qayb xikmada kamida, kaliya adigoo ka waramaya ururada shaqaalaha? Haa way tahay. Hadalka qaabkaas oo kale loo dhisaa, dhegeystayaasha wuxuu kaga tagaa hal raad oo wayn. Waayo waa hadal faahfaahsan, si fudud loo dhegeysan karo, sidookale si fududna loo xusuusan karo.
Boqolka Hage ee Damaloyahanka Bilawga ah
Damalayahan waxaynu uga jeednaa waa aftahan. Waayo marka aynu dhaqankeena dib u raacno, afyahanku markuu la hadlayo dadka deegaankiisa wuxuu kala hadli jiray geed wayn oo damal ah, oo hoos leh gondihii. Hadalka uu halkaa ka jeediyana waxa la odhan jiray damalo. Bal eeg sida afkeenu hodanka u yahay iyo sida aynu uga abraarsanahay. Damalku waa fagaarihii fariinta la isku dhaafsanayay, damaladuna waa fariintii ama khudbadii guubaabinta ahayd ee dadka lagu wacyigalinjiray, damaloyahankuna waa aftahankii warka soo tabinayay. Sidaadarteed halkan waxaynu kusoo gudbinaynaa 100 hage oo damalayahanka bilawga ahi uu ku laylsamikaro haduu isku taxalujiyo. Waayo aftahanimada waa loo dhashaa, waana la baran karaayo waa sida kubada cagta. Sidaadarteed, sida kubada cagtuba alamiito ugu baahantahay si lamida ayay aftahanimaduna alamiito ugu baahantahay. Akhriste ku soo dhawoow boqolka hage.
siyaabaha ugu muhiimsan ee jeedinta khudbad wanaagsani waa in aad tahay mid aad isugu kalsoon. Waa in aad aaminsantahay in aad tahay mid ku wanaagsan hawsha aad qabanayso; si aad taa ugaadhona, waxaad u baahantahay in aad diyaargarawdo, kadib marka aad cilmibaadhis ku samayso mawduuca aad rabto in aad ka hadasho. Intaa marka laga yimaado,sidoo kale kalsoonida fiicani waxay ku timaadaa ku celcelin farabadan oo lagu sameeyo mawduuca laga hadlayo.